विभाजन फाइल प्रणाली क्षति पुन: प्राप्ति - [How to recover by3step]
Your location:Data recovery software>Step>Nepali>विभाजन फाइल प्रणाली क्षति पुन: प्राप्ति
विभाजन फाइल प्रणाली क्षति पुन: प्राप्ति
हटाउन योग्य हार्ड ड्राइव ढाँचा मिलाउन कसरी प्रोम्प्ट गर्दछ?
ढाँचा विभाजन कसरी मर्मत गर्ने प्रम्प्ट गर्नुहोस्? सबैभन्दा सजिलो तरीका फर्म्याट गर्नु हो। फर्म्याटि operation अपरेसन एकदम सरल छ, तपाइँ विन्डोज प्रणाली ढाँचा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई Bplandatarecovery अपरेशन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, ढाँचा गर्नु अघि, तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हराएको डाटा पुन: प्राप्त भयो!
कम्प्युटरमा मोबाइल हार्ड डिस्क को प्रतिनिधित्व ड्राइव पत्र मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्, र "ढाँचा" विकल्प चयन गर्नुहोस्, त्यस पछि पप-अप विन्डोमा "स्टार्ट" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
मोबाइल हार्ड ड्राइभले प्रोम्प्टिंग स्वरूपण खोल्दैन
मोबाइल हार्ड ड्राइभको सामान्य कारणहरू शीघ्र ढाँचा नखोल्ने
मोबाइल कारण हार्ड डिस्कको शीघ्र स्वरूपण गर्न को लागी धेरै कारणहरू छन् जुन एक तार्किक असफलता वा शारीरिक विफलता हुन सक्छ। आज, सम्पादकले केहि अधिक सामान्य कारणहरूको सारांश प्रस्तुत गर्दछ, र सबैलाई कारण र समाधानहरू पत्ता लगाउन विचारहरू प्रदान गर्दछ।
विभाजन फाइल प्रणाली क्षति: फाईल प्रणाली डाटा भण्डारण र व्यवस्थित गर्ने विधि हो, र अन्तर्निहित डेटा पहुँच गर्न एक मेकानिजम प्रदान गर्दछ। फाईल प्रणालीले डिस्क भण्डारण ठाउँ धेरै इकाईहरूमा विभाजन गर्दछ, र रेकर्डिंगका लागि जिम्मेवार हुन्छ यी फाइलहरूलाई यी भण्डारण एकाईहरूलाई विनियोजित गरिएको छ। यदि फाईल प्रणाली बिग्रिएको छ भने, अपरेटि system प्रणाली विभाजनमा डाटा पहुँच गर्न सक्षम हुनेछैन। किनकि ढाँचा अपरेसनले फाइल प्रणालीलाई पुन: निर्माण गर्न सक्दछ, जब विभाजन बिग्रेको छ, प्रणाली प्राय: प्रोम्प्ट गर्दछ कि यसलाई फर्म्याट गर्न आवश्यक छ।
असमर्थित फाईल प्रणाली प्रकार: कम्प्युटरले मोबाइल हार्ड डिस्कको फाइल प्रणाली प्रकारलाई समर्थन गर्दैन। उदाहरण को लागी, यदि मोबाइल हार्ड डिस्कले लिनक्स फाइल प्रणालीको प्रयोग गर्दछ जस्तै EXT4, मोबाइल हार्ड डिस्क विन्डोज कम्प्युटरमा जडित छ। तपाईंलाई ढाँचामा संकेत गरिनेछ। यस अवस्थामा तपाईले मोबाइल हार्ड डिस्कलाई लिनक्स वातावरणमा डाटा पढ्नका लागि राख्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईले Bplandatarecovery सफ्टवेयरको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र Windows को EXT4 विभाजन पढ्न र लेख्न सक्नुहुन्छ।
USB पोर्टको बिजुली आपूर्ति अपर्याप्त छ: सामान्य मेकानिकल हार्ड डिस्क जस्तै मोबाइल हार्ड डिस्क, डाटा पठन र लेखनको लागि आन्तरिक डिस्कमा निर्भर गर्दछ, र विद्युत आपूर्ति आवश्यकताहरू अपेक्षाकृत बढी छन्। यदि USB पोर्टको विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त वा अस्थिर छ, यसले सामान्य पढ्ने र लेख्ने कार्यहरूलाई असर गर्दछ र डाटा भ्रम पैदा गर्दछ।
अनुपयुक्त अपरेसन: धेरै प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल हार्ड डिस्क हटाउनु अघि सेफ डिल्ट हार्डवेयर आइकनमा क्लिक गर्दैनन्, र कहिलेकाँही मोबाइल हार्ड डिस्क सीधा हटाइन्छ जब प्रणालीले पढ्ने र लेख्ने कार्यहरू पूरा गर्दैन, यी अपरेसनहरू सबै हुन् गडबड, हराइरहेको वा बिग्रिएको फाइल निर्देशिका जानकारी निम्त्याउन सक्छ।
डिस्क खराब क्षेत्रहरू: हार्ड डिस्क खराब क्षेत्रहरू डिस्कको क्षेत्रहरू हुन् जहाँ सामान्य पढ्न र लेखन अपरेशनहरू गर्न सकिदैन। खराब क्षेत्रहरूले विभिन्न समस्याहरू ल्याउनेछ, जस्तै खोल्न नसक्ने विभाजनहरू, विभाजनहरू हराउन, र हार्ड डिस्कको गति ढिलो। आदि
जब मोबाइल हार्ड डिस्क ढाँचामा संकेत गरिन्छ, यदि डाटा बढी महत्त्वपूर्ण छ भने, विभाजन ढाँचा नगर्नुहोस्, र डिस्क चेक र अन्य कार्यहरू नगर्नुहोस्, पहिलो काम जुन डाटा रिकभरी गर्नुपर्दछ। हराएको फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्न माथिको ट्यूटोरियल चरण चरण अनुसरण गर्नुहोस्। यदि मोबाइल हार्ड डिस्कसँग धेरै खराब क्षेत्रहरू छन् र सफ्टवेयर स्क्यान गर्न सक्दैन भने, तपाई समाधानको लागि Bplandatarecovery विशेषज्ञ टीमलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
Preभूत त्रुटि पछि विभाजन पुन: प्राप्ति
Nextफाईल अधिलेखन हुनु अघि यू डिस्क डाटा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्